ओली गए, देउवा आएर के नै हुन्छ ! – RaptiSandesh
Home / विचार / ओली गए, देउवा आएर के नै हुन्छ !
ओली गए, देउवा आएर के नै हुन्छ !
केही समयअघि अहिलेको सत्तारूढ, त्यतिखेरको विपक्षी गठबन्धनले सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। सम्पादकहरूसँग आमनेसामने भएर कुरा भन्ने-सुन्नेमा शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका नेताहरू थिए।
बानेश्वरको संसद भवनमा मैले त्यो दिन नेताहरूलाई भनेँ, ‘नेपाली सम्पादकहरूको भाग्य कस्तो भने, उनीहरूको विपक्षी दलहरूसँग मात्र भेट हुने भयो। जोसँग कम प्रश्न सोध्नुछ, उसैसँग मात्र भेट हुने भयो। सत्तामा रहेकासँग विरलै भेट हुने भयो। तपाईंहरू पनि सत्तामा रहँदा त्यस्तै भयो।’
मैले नेताहरूलाई भनेँ, ‘त्यसैले मेरो एउटा ख्वाइस छ। तपाईंहरू भोलि सत्तामा पुग्नुभयो भने सम्पादकहरूसँग यसरी नै आमने-सामने भेट गर्नु होला, ताकि हामी सत्तालाई प्रश्न गर्न सकौं। भ्रष्टाचारका विषयमा, सुशासन, कानुनी शासनका विषयमा, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र सरकारका नीति तथा कामकारबाही बारे हामी प्रश्न गर्न सकौं।’
अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, ‘मानिसको आचरणको साँच्चै परीक्षण गर्ने हो भने उसलाई सत्ता देऊ।’
नेकपा एकताबारे मेरो त्यो उत्साहित लेख पढेका एमाले नेता घनश्याम भुसालले केही महिनाअघि मलाई भनेका थिए, ‘नेकपाले तपाईंलाई धोका दियो। हामीले तपाईंलाई धोका दियौं।’
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग आधा-आधा समय प्रधानमन्त्री र समान हैसियतको पार्टी अध्यक्ष बन्ने लिखित सम्झौता गरेर आएका ओलीले आधा-आधा समय प्रधानमन्त्रीको कुरा छाडौं, समान हैसियतको पार्टी अध्यक्षको पनि कुरा छाडौं, दोस्रो वरियताको अध्यक्षका रूपमा पनि नस्वीकारेर उनको मानमर्दन गर्नेछन् भन्ने लागेको थिएन।
देउवा सुशासन दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेताका रूपमा चिनिँदैनन्। उनको विगतको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ ले त्यसो भन्दैन। भ्रष्टाचार निरूत्साहित गर्ने सदाचारी नेताका रूपमा पनि उनी चिनिँदैनन्।
२०४७ सालको परिवर्तनपछि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसबाट चार जना प्रधानमन्त्री बनेका छन्। भ्रष्टाचार निरूत्साहित गर्ने र सदाचारी प्रधानमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाको मात्र नाम आउँछ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र देउवा त्यो ‘लिग’ का नेता होइनन्। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीमध्ये मनमोहन अधिकारी मात्र ‘सदाचारी’ लिगमा पर्छन्।
समानतामा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धका पक्षमा उभिनेमा पनि देउवाको नाम आउँदैन। भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीताका उनी लगायत नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताले ‘नाकाबन्दी’ भन्ने शब्दसम्म पनि उच्चारण गरेनन्। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नराखी पार्टी र मुलुक चलाउन कठिन हुन्छ भन्ठान्ने नेतामध्ये पर्छन् देउवा।
पार्टीभित्र भने ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो। भारतले लामो समयसम्म ओलीलाई सत्तामा राख्न चाहेको र त्यसविरूद्ध कांग्रेस उभिनुपर्ने धेरै वरिष्ठ नेताहरूले तर्क गर्न थालेका थिए। त्यस्तै विचार राख्ने एक कांग्रेस नेतालाई देउवाले झोंक्किँदै भने, ‘तिमीहरूले कुरा बुझेका छैनौ। भारतले पछि मलाई कति दु:ख दिन्छ भन्ने तिमीहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ।’
यसका बाबजुद देउवा अन्तत: भारतको चाहनाविरूद्ध उभिए। ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने गठबन्धनको नेतृत्व गरे। यो उनको ‘ट्याक्टिक मुभ’ मात्र हो वा भारत र चीन दुवैसँग समानता र आपसी सम्मानमा आधारित सम्बन्ध होस् भन्ने नेपालीहरूको राष्ट्रिय आकांक्षालाई उनले आत्मसात् गरेका हुन्, त्यसको परीक्षण आगामी दिनमा हुने नै छ।
आरजु देउवाले केही वर्षअघि ‘नयाँ पत्रिका’ सँगको कुराकानीमा भनेकी छन्, ‘अत्ति रिसाउने बानी छ। उठेदेखि रिसाउनुहुन्छ। जस्ता कुरामा पनि रिसाउनुहुन्छ। कुनै दिन रिसाउनुभएन भने ओहो आज उहाँलाई के भयो भनेर चिन्ता लाग्छ।’
आरजुका अनुसार उनी जिद्दी पनि कम छैनन्। ‘ए कुरै नगर्नुस्, एकदमै जिद्दी हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्।
देउवा आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपुगेका छन्। पञ्चायतविरूद्धका लामा र कठिन दिनहरूमा नडगमगाइ उभिएर उनले बनाएको संघर्षशील छवि सत्ताको चकाचौंधमा धेरै धूमिल भएको छ। चार-चारपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनको नाममा सम्झिनलायक ‘लिगेसी’ वा कुनै महत्वपूर्ण काम स्थापित छैन।
पाँचौंपटक सत्तामा पुग्दा देउवालाई एउटा फाइदा भने छ, नेताहरूमाथिको अपेक्षा ओलीले यति तल झारिदिएका छन्, थोरै राम्रो गरे भने पनि मानिसले ‘देउवाले ठीकै गरे’ भन्ने छन्।
ओलीको तुलनामा देउवाको एउटा सकारात्मक पाटो पनि छ। आफूसँग भएभन्दा धेरै क्षमताको भ्रमले उनी थिचिएका छैनन्। जिद्दी छन् तर मै जान्ने भन्ने दम्भ कम छ। त्यसैले अरूलाई सुन्छन्, अरूलाई अघि सार्छन्। गरेको कामको जस दिन्छन्। सबभन्दा महत्वपूर्ण, ‘संयोजनकारी छन्’ भन्छन् उनीसँग निकट रहेर काम गरेकाहरू।
संसद भवनमा सम्पादकका प्रश्न र टिप्पणीको जवाफ दिँदै त्यो बेला प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले त प्रधानमन्त्री हुँदा सधैं तपाईंहरूसँग भेटेको छु। अन्तरक्रिया गरेको छु। फेरि पनि सत्तामा गयौं भने हामी तपाईंहरूका प्रश्न र आलोचना सुन्नेछौं।’
३१ असार २०७८, बिहीबार ०९:२४
Previous: ‘पार्टी बिग्रनुमा कार्यकर्ताको पनि कम दोष छैन’
Next: अमिलियाबाट ११० ग्राम खैरो हेरोइनसहित बाँकेका दुई पक्राउ